बाथरूमको नल4ईन्च सेन्टरसेट ब्रश निकल
घर / बाथरूमको नल / सेन्टरसेट बाथरूमको नलहरू / WOWOW ब्रश निकल बाथरूम नल केन्द्र
रेटेड 4.915बाहिर आधारित 35 मूल्यांकन ग्राहक
(35 ग्राहक समीक्षा)
बाथरूम नल ब्रश निकल WOWOW लागत प्रभावी छ। समकालीन शैलीको साथ उच्च-गुणवत्ताको उत्पादन। हाम्रो बाथरूम नल ब्रश निकल अब खरीद गर्नुहोस्!
2321200 स्थापना निर्देशन
बाथरूमको नल ब्रसेल निक २ 2321200२१२००
के तपाईं स्टाइल गर्न वा बाथरूम पुन: शैली गर्न तैयार हुनुहुन्छ? WOWOW मा हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईको बाथरूमको डिजाईन वा पुनः डिजाइन गर्ने कार्य उत्तम इष्टतम प्रदर्शनको लागि उत्तम गुणस्तरको सामग्रीसँग गर्नु पर्छ। र अझैसम्म यो कसैको लागि सस्तो हुनुपर्दछ। प्राय: तपाईको बाथरूम सजाउन वा redecorate गर्न सस्तो घटना छैन। र बजेट-कारण वा अप्रत्याशित कठिनाइहरूको लागि, कोहीले सस्तो नलहरूको खोजी गरिरहेका हुन सक्छ किनकि उनीहरूले बजेट सक्यो। WOWOW मा हामी यसलाई बुझ्दछौं, र त्यसैले म यसलाई कम मूल्यमा टप-अफ-मार्केटको faucets खरीद गर्न सक्षम बनाउँछु। के यो अविश्वसनीय लाग्छ? जब तपाईं हामी र हाम्रा उत्पादनहरूका बारे पढ्नुहुन्न।
WOWOW एक तुलनात्मक रूपमा नयाँ ब्राण्ड हो, जसले नलहरू जस्ता उत्कृष्ट प्लम्बिंग आपूर्ति गर्दछ। सबै प्रकारका डिजाईन र शैलीहरू मिलाउन WOWOW ले सधैं सबै ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई मिल्दो गुणस्तरको नलको व्यापक विकल्प प्रदान गर्दछ। र तपाइँ WOWOW को नल पोर्टफोलियो मा देख्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई राम्रो डिजाइनरहरू भाडा बाथरूम सामान प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि डिजाइन पत्रिकामा फिट हुनेछ। हामी विश्वास गर्छौं कि WOWOW ले तपाईंलाई बजारमा सब भन्दा राम्रो मूल्य-गुणस्तर अनुपात प्रदान गर्दछ हाम्रो शीर्ष डिजाइन नलहरू, उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू, र अझै किफायती मूल्यहरूमा।
समकालीन बाथरूम नल ब्रसल निकल
यस शास्त्रीय र अझै समकालीन बाथरूमको नलमा WOWOW को निकल ब्रश निकले दुई पानी ह्याण्डलहरू देखाउँदछ, एउटा तातो पानीको लागि र अर्को चिसो पानीको लागि। यो रेट्रो डिजाइन एक विशेष स्पर्श संग तपाइँको बाथरूम लाई प्रकाश बनाउँछ। जस्तो तपाईंलाई थाहा होला, बाथरूमको नल प्राकृतिक प्रवचन पोइन्ट हुन्, यद्यपि तिनीहरू सानो बाथरूम वस्तु हुन्। यस कारणका लागि तपाईं आफ्नो बाथरूममा विशेष रेट्रो टच दिन सक्षम हुनुहुन्छ, र कार्यक्षमता र गुणवत्तामा सम्झौता नगरी। यस बाथरूम नल ब्रश निक निकै WWOW को अन्य बाथरूम faucets संग संयोजन गर्न सजिलो छ कि एक समान शैली मा उपलब्ध छन् र यो बाथरूम नल ब्रश निकल जस्तै छ।
ब्रश निकल फिनिस निकल कोटिंगद्वारा बनेको छ जुन तार ब्रशको साथ एटिching गरेर समाप्त भएको छ। वास्तवमा यही कारण यो छ कि यस बाथरूमको नल ब्रश निकले यसको बनावट स्वरूप प्राप्त गरेको छ। यस ब्रश निकल फिनिशले यस बाथरूमको नललाई न्यानो र अद्वितीय स्वर दिन्छ। यस बाहेक, यसले यस स्नानगृहको नलको सतहमा यसको प्रकाश र छायाको भिन्नताहरूको साथ एक विशिष्ट रूप सिर्जना गर्दछ। यसको विशेष चरित्रका कारण WOWOW को बाथरूमको नल ब्रश निकल कुनै पनि पाँच तारा होटेल वा विशेष हवेलीमा ठाउँ बाहिर हुने छैन।
प्रथम श्रेणीको बाथरूम नल ब्रसल निकल
तपाईंले तुरुन्तै यो बाथरूमको नल देख्नुहुन्छ जब तपाईं यो आफ्नो हातमा छ। नयाँ बाथरूम नल स्थापना गरेको भन्दा छोटो अवधिको पछि टिप्न थाल्छ भन्दा बढी कष्टप्रद अरू केही छैन। ड्रिपिंगको यो आवाजले तपाईंलाई पागल बनाउँछ, विशेष गरी रातमा। त्यसो भए तपाईको बाथरूमको नल बदल्न बाहेक अरू कुनै समाधान हुँदैन। त्यो महँगो घटना हुन सक्छ, र तपाईंको सस्तो बाथरूम नल अन्तमा त्यति सस्तो भएन। WOWOW मा तपाईं अर्कोतर्फ जान्नुहोस् कि उच्च गुणस्तरको उत्पादनहरूले उच्च नै मूल्यको पनि हुनुपर्दैन। WOWOW प्रमाणित गर्दछ कि तपाइँ सस्तो मूल्यमा उच्च गुणवत्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाथरूम नल ब्रश निक निक एक विशाल तांबे आधार, स्टेनलेस स्टील को एक खोल र एक टिकाऊ निर्माण प्रदान गर्दछ। स्थायित्व मुख्य उद्देश्य हो जब यो बाथरूमको नल ब्रश निक निक गरिएको थियो। र त्यो तपाईंले तत्काल याद गर्नुहुनेछ।
WOWOW को बाथरूमको नल ब्रश निकलको प्रत्येक ट्याप काँसाबाट बनाइएको थियो। यो हस्तनिर्मित बाथरूम नल सीयूपीसी- र NSF 61-प्रमाणित केहि के लिए हैन। बाथरूमको नलले WOWOW को निकल ब्रश निकै स्थिर स्प्लाशफ्री स्ट्रिम राख्दछ। यसका साथै तपाईले यस बाथरूमको नलको सतहमा कुनै पनि औंला प्रिन्टहरू देख्नुहुने छैन। यो सफा गर्न सजिलो छ र मर्मत गर्न सजिलो छ। यस तरीकाले तपाईंसँग लामो अवधिको लागि स्पार्कलिंग ब्रश निकल बाथरूम नल हुनेछ।
लागत प्रभावी बाथरूम नल ब्रसल निकल
WOWOW को बाथरूम नल ब्रश निकल तपाइँलाई समय आकर्षण र सहनशीलता प्रदान गर्न कला प्रविधिहरूको राज्यको साथ पूर्ण भयो। र यो सबै एक किफायती मूल्य को लागी। सबै भन्दा माथि, एबीएस-एरेटरले तपाईंलाई %०% पानी बचाउँछ, त्यसैले तपाईं यसलाई तपाईंको पानीको बिलमा पनि देख्नुहुनेछ। WOWOW यसैले धेरै तरिकामा बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
आकर्षक मूल्य र पानी बचत सुविधाहरू बाहेक, यो बाथरूम नल ब्रश निकल पनि स्थापना गर्न सजिलो छ। यो-इन्च Centeret बाथरूम नल एक predrilled 4-होल बाथरूम सिंक मा स्थापना गर्न सकिन्छ। यस शास्त्रीय रूपमा डिजाइन गरिएको बाथरूमको नल ब्रश निकले पप अप स्टपर पनि समावेश गर्दछ। सबै स्थापना सामग्री नल संग समावेश। यो बाथरूम नल ब्रश निकल सजिलैसँग स्पष्ट किस्तै निर्देशनहरूको साथ स्थापना गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं पेशेवर हुनुहुन्न भने पनि। यस तरिकाले तपाईं अझ बढी लागत बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क ढुवानी र 90 ०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी
WOWOW ले यसको उत्पादनहरूको लागि खडा गर्दछ र यसको नलको गुणस्तरको बारे विश्वस्त छ, यस बाथरूमको नल ब्रश निकलको साथ year बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गरिन्छ। यदि बाथरूमको नलले ब्रश निकले WOWOW को अधिकतम प्रति प्रतिज्ञा गरे अनुसार प्रदर्शन गर्दैन भने, तपाइँ कुनै समस्या बिना ब्राण्ड नयाँ बाथरूम नल ब्रश निकल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यसका साथै, WOWOW ले तपाईंलाई मानार्थ 90 ०-दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि हामीले तपाईंलाई प्रदान गरेको कुरा तपाईंलाई प्रदान गरेको छैन, तपाईं तपाईंको बाथरूमको नल हामीलाई कुनै प्रश्न नगरी फिर्ता पठाउन सक्नुहुनेछ। WOWOW ले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पालनाको लागि खडा गर्दछ, र यदि तपाईंसँग यो भावना छैन भने, हामी यसको लागि हाम्रो जिम्मेवारी लिनेछौं। जतिखेर हामीले बाथरूमको नल ब्रश निकल फिर्ता प्राप्त गर्‍यौ, तपाईंले तपाईंको पैसा तुरून्त फिर्ता पाउनुहुनेछ!
WOWOW का सबै उत्पादनहरु जस्तै, यो बाथरूम नल ब्रश निकल संसारको कुनै पनि ठाउँमा नि: शुल्क वितरित हुनेछ। WOWOW को व्यापक विश्वव्यापी दर्शकहरु छन् र सबैले लागत-प्रभावी गुणवत्ता WOWOW ले प्रस्ताव गरेको कदर गर्दछ। हामी चाहन्छौं कि तपाईले हाम्रो उत्पादन पनि चलाउनु होस्। र हामी पक्का छौं कि तपाईं अब कहिल्यै अन्य faucets मा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न।
बाथरूम नलको फाइदा संक्षेप मा निकल ब्रश:
 क्लासिक डिजाइन र अझै समकालीन
 हस्तनिर्मित ब्रश निकल समाप्त
SKU: १2321200००।। विभाग: बाथरूमको नल, सेन्टरसेट बाथरूमको नलहरू टैग:4इन्चको, ब्रश निकल, अलग ह्यान्डल
9 x 2.2 x 5.1 इन्च
NSF सिरेमिक डिस्क भल्भ, मिक्स पानी,--होल in इन। Centeret डिजाइन, स्थापना गर्न सजिलो
डेक माउन्ट गरियो, hole होल स्थापना inch इन्च Centeret
तातो र चिसो पानी नियन्त्रण
एच *** y 2020-04-08
ठ्याक्कै मैले चाहेको सिink्क केहि स्टोरहरुमा गयो र मैले मनपराएको केहि पनि भेट्न सकेन यो स्थापना गर्न धेरै नै सजिलो थियो, र तपाईंले आवश्यक सबै चीजहरू सहित आउँदछ र तपाईंलाई नल संलग्नकहरू र ड्रेन सहित समावेश गर्दछ। सफा गर्न को लागी सजिलो छ, बच्चाहरु लाई राम्रोसँग समातिएको छ, अधिक माग्दैन।
यो एक राम्रो हेरिरहेको नल हो जुन हामीले अपेक्षित गरेका धेरै भागहरूको साथ आयो। हामीले स्टोरमा जानको लागि सिन्क पार्टहरू अन्तर्गत किन्नु पर्दैन जुन कहिलेकाँही नलको साथ आउँदैन। हामीले यस वस्तुको मूल्यको पनि कदर गर्‍यौं। हामीलाई लाग्यो कि हामीले राम्रो सम्झौता पायौं।
मैले पर्याप्त सस्तो चीजको लागि खोजिरहेको थिएँ। जब म यसलाई खोल्छु म कत्ति भारी र उच्च गुणवत्ताले महसुस गरेकोमा म छक्क परें। तिनीहरू उत्कृष्ट देखिन्छन्, र प्रमुख ब्रान्डको लागतको एक अंशको लागि।
दुई पुरानो बाथरूम फाल अन-स्थापना गर्न मलाई २ घण्टा लाग्यो। यो एक धेरै राम्रो डिजाइन गरिएको छ, म यसलाई १० मिनेटमा मात्र स्थापना गर्न सक्दछु, तर मलाई पनि विश्वास छ कि म यसलाई १ min मिनेट भन्दा कममा स्थापना गर्न सक्दछु भविष्यमा आवश्यक परेमा। म साँच्चिकै सोचिरहेछु कि किन पुरानो faucets हटाउन यति कडा डिजाइन गरिएको थियो।
म यो नलसँग अत्यन्तै खुशी भएँ। यो भारी, चिल्लो ह्यान्डलहरू, राम्रो पानीको प्रवाह र गुणात्मक नलहरू हुन्। म लीरी थिएँ, कुनै खास ब्रान्ड होइन कि मैले देखेको बाइट म प्रभावित छु। निश्चित रूपमा यो ब्रान्ड फेरि खरीद गर्दछ।
अति उत्तम बाथरूम सि bathroom्क नल। सबैलाई स्थापना सजिलो बनाउन समावेश गरिएको थियो। मेरो नयाँ नलको रूप र भावना मनपराउँनुहोस्!
यो नल बाथरूम रिमोडलहरूको योजना बनाउँदा म खोज्दै थिए। यो हाम्रो मास्टर स्नानको लागि यति मनपर्‍यो कि मैले यसलाई मुख्यको लागि फेरि किनें। यसको पातलो र स्टाइलिश। प्लस मूल्य सही छ। मेरो अपेक्षाहरू नाघ्यो
उत्कृष्ट उत्पादन, धेरै राम्रो देखिन्छ र स्थापना गर्न सजिलो छ। प्याकेजि great राम्रो थियो, उत्पादन लाई बचाउँछ। मलाई उच्च स्तरको नल चाहिन्छ त्यसैले तपाई सजिलै तल आफ्नो हातहरू तल झार्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो समाप्त, दृढ निर्मित।
धेरै राम्रा नल र एक्सेसरीहरू जुन यो xame को साथ। ब्रेडेड आपूर्ति होजहरू राम्रो, लामो (२० ″ प्लस) र पर्याप्त भारी शुल्क हुन्, र नाली पनि एक उपयोगी प्लस हो!
म यस खरीदको साथ साँच्चिकै खुसी छु, नल एकदम राम्रो देखिन्छ र मूल्यको लागि ठोस महसुस गर्दछ। यसको शीर्षमा तपाईले फ्लेक्स लाइनहरू पनि पाउनुहुनेछ जुन ठोस गुणवत्ताका थिए… .तर प्रतीक्षा गर्नुहोस्! त्यो सबै होइन, तपाईं पप-अप भल्भको प्रकार पनि पाउनुहुन्छ जुन यसलाई राख्न सजिलो थियो, प्रयोग गर्न सजिलो थियो र राम्रो पनि देखिन्छ। कुनै पछुतो छैन।
D *** ई2020-05-13
हामीलाई यो नल मन पर्यो। यो पानी हुकअपहरूको लागि ड्रेन र फिटिंगको साथ पूर्ण भयो। म निश्चित रूपमा यस उत्पादनलाई फेरि अर्डर गर्दछु
e *** मि2020-05-19
यो एक सुन्दर र स्थापना गर्न प्याकेज हो। यो तपाईं स्थापना गर्न सबै आवश्यक संग आउँछ। स्थापना गर्न केहि मिनेटहरू मात्र लाग्यो र यो राम्रो देखिन्छ र देखिन्छ। म अर्को किन्नेछु।
किनकि अवस्थित लाभेटरी नल टाउको काउन्टरको नजिक मात्र थियो र सिंकबाट पानी छरियो। मैले यो टुक्रा किनें। हाम्रो शिविरमा आएको भन्दा धेरै राम्रो र हाम्रो घरमा प्रयोगको लागि उपयुक्त हुन्छ। यो खरीद संग खुशी छ।
सुन्दर र ठूलो मूल्य। ह्यान्डल गर्न सजिलो। पुश भल्भ मनपर्दछ। थाहा थिएन यो संग आयो।
यो नलले राम्रो काम गर्यो र मेरो छेउछाउको कुनै पसल भन्दा धेरै राम्रो मूल्यमा। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो र राम्रो देखिन्छ।
एच *** ए2020-06-02
यस्तो ठूलो मूल्यमा यो पाउँदा खुशी भयो। गुणवत्ता मूल्यसँग मेल खान्छ तर यसले हाम्रो बच्चाको बाथरूमको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ।
D *** ई2020-06-02
यदि म मेरो सिink्कमा क्रल गर्न सक्दछु र मैले यो नलको पछाडि शक्ति महसुस गर्दछु। मलाई लाग्छ कि मेरा हातहरूले बप्तिस्मा लिने बित्तिकै यो भगवान पठाईएको नलमा हिट भयो।
हामीले यी दुई मध्ये दुई महिना अघि स्थापना गर्यौं ..
तिनीहरू अद्भुत छन्! तिनीहरू धेरै स्टाइलिश र एक उत्तम मूल्य हो!
मैले यी सिink्क नल सेटको तीन सेटहरू खरीद गरें। मैले दुई गुणा बढी खर्च गर्न सक्थें तर मेरो बजेटमा यो थिएन। यी धेरै राम्रो गुण हुन् र उत्तम देखिन्छन्। मसँग एक पेशेवर प्लम्बर स्थापना भएको थियो र उनले भने कि ती सब भन्दा राम्रा सेटहरू हुन् जुन उनले देखेका छन्। अत्यधिक सिफारिश गर्दछ।
मैले मेरा बाथरूमहरू अपग्रेड गर्न यी प्रयोग गरें। तिनीहरू स्थापना गर्न र सजिलैसँग सञ्चालन गर्न सजिलो छ। मलाई उनीहरूले संचालन गर्न कत्ति राम्रो लाग्छ
मैले किनेको उत्तम बाथरूम नल! शानदार मूल्य, सजिलो स्टाइलिश लुक, उत्कृष्ट कार्य गर्दछ!
राम्रो उत्पादन। यदि अर्को आवश्यक भएमा निश्चित रूपमा अर्को खरीद गर्नुहोस् र स्थापना गरिएकोमा यो उत्तम देखिन्छ।
तलको बाथरूमको लागि उत्कृष्ट प्रतिस्थापन नल। सजिलो स्थापना, र कुनै अवरोध संग काम गर्दछ। अर्को माथिल्लो स्नानको लागि समान खरीद गर्न खोज्दै।
मैले मेरो लाउरेटरी नल बदल्नको लागि अरू केहि पनि किन्नु पर्दैन। राम्रो देखिन्छ। राम्रो मूल्य।
गुण र मान # 1 यस चीजको साथ। सुपर सजिलो स्थापना र तपाईको स्थापना को लागी सबै आवश्यक बक्स मा छ। तपाई त्यो कहिँ पनि हराउन सक्नुहुन्न।
हामीले यी दुबै बाथरूमको लागि खरीद गरेका थियौं। मलाई ड्रेन स्टपर मन पर्छ। यो एक चीज बनाम चीज मा एक पेंच। यसले यसलाई धेरै सफा देखिन्छ र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछ। समग्र, चिकना र बहुमुखी डिजाइन।
करीव minutes० मिनेटमा स्थापना गरियो। पुरानोबाट अपग्रेड गर्नुहोस् र हाम्रो बाथरूमलाई अधिक आधुनिक बनाउन यो राम्रो विचार थियो
स्टाइलिंग र ब्रश निकल फिनिश प्रेम गर्नुहोस्। स्थापना गर्न सजिलो। मसँग तीनवटा बाथरूम छन् र ती सबैमा मसँग यस नल छ।
यो बदल्न को लागी खरीद गरियो र विरलै प्रयोग गरिएको बेसमेन्ट बाथरूममा पुरानो नल। यो कामको लागि मलाई आवश्यक सबै चीजको साथ आयो। म यस नलको गुणस्तरबाट प्रभावित छु।
धेरै राम्रो उत्पादन! म यो कसरी राम्रोसँग बनेको देखेर छक्क परें। म मेरो अर्को बाथरूमको लागि फेरि अर्को खरीद गर्दैछु।
मैले दुबै मास्टर नुहाउने पक्षहरू परिवर्तन गरें र यो हावा हो। स्थापना गर्न सजिलो छ र तिनीहरू साँच्चिकै राम्रो देखिन्छन् र त्यस मूल्यको लागि म अन्य बाथरूम पनि परिवर्तन गर्ने छु।
स्थापना गर्न सजिलो, आधुनिक, र सस्तो। मेरो आधा बाथरूममा अद्भुत देखिन्छ।
ठूलो मूल्य महँगो देखिन्छ र राम्रो काम गर्दछ। पैसाको लागि वास्तविक मूल्य म यो सिफारिश गर्दछ यदि तपाईंलाई नयाँ नल वा भर्खरै अपग्रेड गरिएको देखिन्छ भने
हामीलाई नुहाउन चाहिएको थियो नुहाउनको लागि र हाम्रो स्थानीय पसलहरूसँग हामीले मनपर्ने कुरा गरेनौं। यो नल सही काम गर्दछ! स्थापना गर्न सजिलो र उच्च कक्षाको लुक
मैले यी faucets को एक किनेको छु र यति मनपर्‍यो कि मैले मेरो अन्य बाथरूमको लागि दुई बढी किनें। यो यथोचित मूल्य थियो र यसले मेरो बाथरूमको डूब सफा गर्यो! उत्पादन छिटो र उत्कृष्ट आकार मा आइपुगे। अद्भुत नल म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु यो नल!
मूल्य सहि थियो र स्थापना गर्न सजिलो थियो। म यो कसरी राम्रो काम गर्दछ र कति राम्रो देखिन्छ संग धेरै खुसी छु। साँच्चै राम्रो नल र राम्रो देखिन्छ। धेरै सरल स्थापना